Wararka - Qalabaynta
At P&Q, waxaan fahamsanahay in tayo sare leh, qalab qalabaysan oo sifiican loo qaabeeyay ay soo saaraan alaab tayo sare leh, adeegsi wax ku ool ah iyo nolol qalab dheer Intaas waxaa sii dheer, barnaamijka dayactirka qalabka P & Q ee firfircoon wuxuu hubiyaa waxqabadka ugu wanaagsan, kalsoonida iyo cimri dhererka.
Marka ay timaaddo qalabaynta, waxaan u shaqaaleynaa habab cusub oo tixgelin leh tallaabo kasta oo jidka loo maro.
Haddii aan gacan ka geysaneyno qalab dhismo, soo saarista qalabaynta gudaha ama xitaa la qabsiga qalab jira oo aan u soconayn sidii la rabay, P&Q wuxuu hubin doonaa inaad haysato qalab ku habboon shaqada.
● Qaab dhismeedka birta ah ee guriga ku dhex jira & qalabka dhismaha
● Qalabka guriga ku dhinta ee wax lagu rido cadaadiska
● Qalab dhisid dibedda iyo maaraynta
● Beddelaadda qalabka jira iyo dayactirka
Maintenance Dayactirka qalabka iyo qiimeynta
● Jigs iyo kulan
---- Qalabka mashiinka CNC
---- Budada budada ah ee lagu qariyo jigs
---- Wax soo saarka jigjyada gaarka ah iyo waxyaabaha la isku dhejiyo
---- Baaritaanka cadaadiska iyo jigs xaqiijinta
Shaqaynta nolosha oo dhandamaanad
P&Q waxay siisaa qalabaynta macaamiisha dammaanad qaad noloshiisa oo dhan. Mar alla markii ay macaamiisha lacag bixiyaan, P&Q waxay mas'uul ka noqon doontaa dhammaan qalabaynta dayactirka iyo dayactirka.
Qalabaynta P&Q oo 100, 000 cimrigoodu caadi yahay. Haddii amarradu ka sarreeyaan 100, 000 kumbiyuutar. P&Q waxay samayn doontaa qalab cusub markii loo baahdo oo macaamiisha kama qaadi doonto khidmad qalab ah.
Noocyada kala duwan ee xulashada P & Q waa mid ballaaran; abuurista alaabooyin u dhexeeya 7 garaam illaa 30 Kiilo garaam. Kala duwanaanshaheenna tuubada ayaa adeegsada mishiinnada nus-shubka cadaadiska sare ee otomaatigga ah, mashiinnada culeyska cadaadiska hooseeya, wasakhda gacanta lagu shubo, iyo wax kasta oo u dhexeeya.
Waxaan bixinnaa awood sare, bir adag oo adag oo adkeysi leh ayaa dhinta iyo sidoo kale hal adeegsi, ciidaha maalgashiga. Kala duwanaanshaheena otomaatiga ah wuxuu u ogolaanayaa shubista saxda ah ee saxda ah iyo kuwa soo noqnoqda, oo ay weheliso awooda lagu ogolaanayo quburadeena xirfada leh inay ku mudayaan farshaxanimadooda daan kasta. Si fudud u dhig: haddii ay u baahan tahay in la tuuro waxaan leenahay xirfad & farsamo aan ku ridi karno. P&Q waa beddelka wanaagsan ee xulashadaada.